Maraykanka oo gantaalo difaac geeyey Kuuriyada Koonfureed - Wargane News
Home Somali News Maraykanka oo gantaalo difaac geeyey Kuuriyada Koonfureed
Dowlada Maraykanka ayaa maanta oo Sabti ah shaacisay inay gantaalo horleh oo nooca difaaca ah ay geystay wadanka Kuuriyada Koonfureed, si looga hortago khatarta dowlada Kuuriyada Waqooyi.
Go´aankan Maraykanka qaatay ayaa ah mid looga jawaabayo Gantaalkii ridada dheeraa oo uu wadanka Kuuriyada Waqooyiga todobaadkan ku guuleystay inuu tijaabiyo.
Gantaalada loo yaqaan Patriot missile oo ah kuwa soo rida gantaalada hawada ayaa lagu xoojiyey ciidamada Maraykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ee ku sugan xaduuda dalka Kuuriyada Waqooyi iyo duleedka magaalada Seoul ee caasimada Kuuriyada Koonfureed.
Xiisada ka taagan dalalka Kuuriya ayaa ah mid sii xumaaneysa kadib markii Dowlada Kuuriyada Waqooyi sheegtay inay dar dar gelineyso dhismaha hubkeeda wax gumaada ee Nukliyeerka iyo gantaalada ridada dheer.
Beesha Caalamka ayaa si weyn u cambaareysay tijaabada hubka ee uu wadankaasi wado, balse illaa iyo hada Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inaysan waxna ka bedali doonin barnaamijkooda militari oo ay khatar u arkaan dalalka jaarka la ah gaar ahaan Kuuriyada Koonfureed iyo Japan.